Vanim-potoana vaovao ho an'ny Delta Airlines sy ny Air Korea: Boston mankany Seoul aloha ny fiaramanidina
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Vanim-potoana vaovao ho an'ny Delta Airlines sy ny Air Korea: Boston mankany Seoul aloha ny fiaramanidina
Misy fiaraha-miombon'antoka vaovao misongadina eo anelanelan'ny Korean Air ary hisokatra ny Delta Airlines, ary manana andraikitra lehibe amin'izany i Boston.
Serivisy serivisy vaovao tsy an-kiato eo anelanelan'ny Boston sy Seoul no hapetraka amin'ny 12 aprily 2019 iaraha-miasa amin'ny mpiara-miombon'antoka, Delta Air Lines.
Ny sidina vaovao any Boston, miaraka amin'ny Minneapolis / St vaovao. Ny serivisy Paul-Seoul izay natombok'i Delta tamin'ny taona 2019, no nanampy voalohany tamin'ny tambajotra Seoul-Incheon an'ny fiaraha-miombon'antoka hatramin'ny nanombohan'ny mpiaramiasa roa ny fiarahamiasa tamin'ny Mey.
"Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny fandaharam-potoanan'ny Korean Air sy Delta, ny mpanjifanay dia afaka mankafy safidy fitsangatsanganana tsy manam-paharoa", hoy i John Jackson, filoha lefitra mitantana ny Korean Air. "Ny fiaraha-miombon'antoka dia tsy azo lavina fa fiaraha-miasa matanjaka indrindra transpacific ary manome ny zotram-piaramanidina roa miaraka amin'ny fifaninanana matanjaka."
Ny mpanjifa dia afaka miditra amin'ny toeran-kaleha 290 ao amin'ny Delta any Amerika ary toerana 80 any Azia amin'ny Korean Air. Tamin'ny volana janoary lasa teo, ny Koreana sy ny Delta dia niara-niasa tao amin'ny Incheon Terminal 2 nalaina tamin'ny indostria, nahatonga ny fifandraisana teo amin'i Azia sy Amerika ho anisan'ny haingam-pandeha indrindra.
"Amin'ny maha vavahady lehibe ho an'ny indostrian'ny haitao avo lenta, i Boston no teboka tsy voatanisa malaza indrindra avy any Korea miaraka amin'ny fangatahana mitombo haingana any Azia," hoy i Korean Air Jackson. "Ny tanàna, miaraka amin'ireo oniversite sy oniversite marobe, dia ivon-toerana mitombo ao New England izay manintona ireo orinasa amin'ny indostria mivoatra haingana toa ny IT, haitao biolojika, fahasalamana, famatsiam-bola ary fanafody."
Korea Air sy Delta dia mampiasa vola any Boston, ary ity sidina vaovao mankany Seoul ity dia manampy rohy manan-danja izay atolotry ny mpiara-miombon'antoka JV amin'ny mpanjifa any amin'ny faritra Boston. Any ankoatr'i Seoul, ireo mpitsangatsangana dia afaka mahazo ny toerana rehetra any Azia amin'ny Korean Air miaraka amin'ny traikefa tsy manam-paharoa amin'ny Incheon's Terminal 2 misy fifandraisana mahomby sy tsy misy tohika ary efitrano fatoriana efatra tsara tarehy Korean Air, miampy efitrano hafa natokana handefasana mpandeha amin'ny kabine rehetra misy fandroana mifamaly sy faritra fatoriana. .
Ny serivisy any Boston-Seoul dia hiasa amin'ny fiaramanidina Dreamliner vaovao an'ny Korean Air izay misy karazan'olon-fatoriana enina Kilasy Voalohany, efitrano fatoriana 787 kilasy Prestige ary seza 9 amin'ny kilasy toekarena.
Ny Kilasy Voalohany dia misy fisakafoanana amin'ny toeram-piompiana miaraka amin'ny sakafo ambolena ao amin'ny toeram-pambolen'ny zotram-piaramanidina ao amin'ny Nosy Jeju, mpanara-maso avo lenta 23 santimetatra, duvet faran'izay tsara sy lamba firakotra, fitafiana fampiononana ao anaty fiaramanidina avy amin'i Gianfranco Ferre, ary kitapo fidirana marika marika DAVI miaraka amin'ny vokatra kosmetika lafo vidy dimy hafa. Ny mpanjifa kilasy voalohany dia afaka mahazo tombony manokana ihany koa amin'ny efitrano fandraisam-bahiny voatokana sy efitrano fandraisam-bahiny First Class ao amin'ny seranam-piaramanidina Incheon.
Korean Air's Prestige Suites dia manolotra seza fisaka 21-inch malalaka malalaka manodidina ny 75 santimetatra miaraka amin'ny fidirana mivantana. Eny an-tsena, ny mpanjifa Prestige dia mankafy ny programa fisakafoanana sy divay ahazoana divay an'ny Korean Air ary kit kitapo vola lena an'ny DAVI.
Mandritra izany fotoana izany, ny sokajy toekarena Koreana Air dia anisan'ny mampientanentana indrindra amin'ny indostria, misy 33-34 santimetatra eo anelanelan'ny seza, mpanara-maso manokana 10.6 santimetatra ary safidy isan-karazany ny sakafo.
Miaraka amin'ny fanombohana ny Boston sy Minneapolis / St. Paul, Korean Air ary Delta dia hanolotra sidina hatramin'ny 29 isan'andro eo anelanelan'ny vavahady 14 any Etazonia sy Azia. Avy any Korea irery, ireo mpiara-miombon'antoka dia hanolotra sidina 115 isan-kerinandro mankany amin'ny toeran-tsika 13 any Etazonia, fiakarana mihoatra ny 10% manomboka amin'ny fahavaratra 2018. Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny fandaharam-potoanan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka roa dia samy manana ny tombony azo avy amin'ny flier matetika.
Ny antsipirian'ny fandaharam-potoana ho an'ity serivisy vaovao ity dia eto ambany, miaraka amin'ny famandrihana dia hisokatra amin'ny faramparan'ity fahavaratra ity.
Serivisy vaovao tsy an-kiato an'ny Korean Air eo anelanelan'i Boston sy Seoul:
Boston 1:30 hariva
Seoul 4:50 hariva (rahampitso)
Talata, alarobia, zoma, asabotsy, alahady
Manomboka ny 12 aprily 2019
Seoul 9:30 maraina
Boston 10:30 maraina
Ny fampiasam-bola mitohy ataon'ny Delta any Boston dia hahatratra ny fiaingana an-tampon'ny 112 amin'ny fahavaratra 2018, fitomboan'ny fiaingana 19 raha ampitahaina amin'ny fahavaratra 2017 sy ny fiaingan'ny 29 amin'ny fahavaratra 2016. Ny Delta sy ireo mpiara-miasa aminy dia hanompo toerana 52 avy any Boston, anisan'izany ireo toerana iraisampirenena 18. Ny fanambarana androany momba ny serivisy Seoul amin'ny Korean Air dia mitondra fandrakofana tsy miato isaky ny faritra fitsangantsanganana lehibe. Delta dia manolo-tena hanatsara ny traikefa ho an'ny mpanjifa any Boston, ary manome seza kilasy voalohany betsaka noho ny mpitatitra hafa misy kilasy voalohany isaky ny sidina hatramin'ny Jona. Delta Sky Club dia miasa toerana roa ao amin'ny Terminal A, manome ny mpanjifa safidy safidy sakafo mahasalama sy marobe ary safidy fisotroana maimaimpoana isan-karazany ao anatin'izany ny labiera asa tanana any an-toerana, ary ny kafe Starbucks. Delta dia manolotra seza fandriana fisaka feno ao amin'ny Delta One amin'ny sidina rehetra mankany Eropa, sidina voafantina mankany Los Angeles ary amin'ny sidina rehetra mankany amin'ny toeram-pialofana laharana 1 any Boston, San Francisco.
Momba ny Air Korea sy ny Delta Joint Venture
Miaraka amin'ny sidina an-tampon'ny 27 eo anelanelan'ny Etazonia sy Azia, ny fiaraha-miombon'antoka Delta sy ny Korean Air dia manome tombony tombony ho an'ny mpanjifa manerantany amin'ny iray amin'ireo tambajotram-pifandraisana manerantany ao amin'ny tsena trans-Pasifika. Vao haingana ireo mpiara-miombon'antoka dia nanitatra ny sidina sideshare ary tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia nahazo fankatoavana avy amin'ny governemanta ho an'ny fiaraha-miombon'antoka Pasifika Pasifika izay hanatsara ny fifandraisana eo amin'i Etazonia sy i Azia ka hanome safidy bebe kokoa ho an'ny mpanjifa amin'ny dia lavitra. Ny sidina roa tonta dia nanatsara ny tombotsoan'ny programa tsy fivadihan'izy ireo, anisan'izany ny fahafaha-mahazo kilometatra maro amin'ny programa roa ary manavotra azy ireo amin'ny tambajotra nitarina.
Fipoahana arabe akaikin'ny seranam-piaramanidina Bologna no namono olona 2, naratra 55
Jamaica handray ny fihaonamben'ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany any Amerika amin'ny volana septambra